Nei Usingafanire Kutenga Webhusaiti Idzva Zvakare | Martech Zone
Ichi chichava rant. Hapana vhiki rinoenda ndisina makambani anondibvunza kuti tinobhadharisa marii pa Website itsva. Mubvunzo pachawo unomutsa mureza mutsvuku wakashata uyo unowanzoreva kuti kutambisa nguva kuti ndivateverere semutengi. Sei? Nekuti ivo vari kutarisa kune webhusaiti seiyo static projekiti iyo ine yekutanga uye yekupedzisira poindi. Haisi… iri svikiro rinofanirwa kugara richigadziriswa uye kubviswa.
Tarisiro Yako Yakanyatso Kupfuura Yako Webhusaiti
Ngatitange nei iwe uine iwe webhusaiti kutanga nayo. Webhusaiti chikamu chakakomba cheako huwandu hwenhamba yedhijitari iko kwakavakirwa zita rako uye iwe unogona kupa ruzivo-runodiwa kune vangangove vatengi. Kune chero bhizinesi, kuvapo kwavo kwedhijitari haisi yavo webhusaiti chete… zvinosanganisira:
Dhairekitori Sites - zvinoonekwa pamasaiti ari kutsvaga vanhu chigadzirwa kana sevhisi? Zvichida iAngi, Yelp, kana mamwe madhairekitori emhando.
Kuyera uye Ongororo Sites - Pamwe pamwe nemadhairekitori, iwo anoonekwa pane saiti dzekuongorora uye vari kubata iro zita nemazvo? Vari kukumbira ongororo, kuvapindura, uye kugadzirisa zvisina kunaka kuongororwa?
YouTube - Vane mavhidhiyo paYouTube anotarisana nemusika wavo nemaindasitiri? YouTube ndiyo yechipiri injini yekutsvaga uye vhidhiyo inzira yakakosha.
Influencer Sites - Kune masayiti ane hunhu uye hunhu hune vateveri vakawanda kubva kune vakagovana vateereri? Uri kutsvaga kuzivikanwa pamasaiti aya?
Tsvaga Injini - Vatengi vari kutsvaga ruzivo pamhepo kuti vavabatsire mukuita kwavo sarudzo. Iwe uripo kwavanotarisa? Iwe une raibhurari yezvinyorwa izvo zvinowirirana kusvika pari zvino?
Social Media - Vatengi vari kutarisa masangano epamhepo ari kupa kukosha kuri kuenderera uye kupindura vatengi. Iwe uri kushingairira kubatsira vanhu munzira dzekudyidzana uye mumapoka epamhepo?
Email Marketing - Uri kukudziridza nzendo, tsamba dzeruzivo, uye zvimwe zvinobuda zvekutaurirana zvinobatsira vanotarisira vatengi kufamba parwendo?
kushambadza - Kunzwisisa kupi uye yakawanda sei simba uye bhajeti inofanira kushandiswa kuwana zvitsva zvinotungamira mukati mese internet hazvifanirwe kuregeredzwa.
Kurongedza kuvapo kwako kwedhijitari kune ese epakati nepakati uye chiteshi chinhu chakakosha mazuva ano uye zviri kupfuura kungovaka chete webhusaiti itsva.
Yako Webhusaiti Haifanire Kuva Done
Yako webhusaiti haina kumbobvira nokuita. Sei? Nekuti iyo indasitiri yaunoshanda iri kuramba ichichinja. Kuva newebsite kwakafanana nekuva nechikepe chauri kufamba pamusoro pacho nemvura yakashama. Iwe unofanirwa kugara uchichinjira kumamiriro ezvinhu - kunyangwe vari vakwikwidzi, vatengi, injini dzekutsvaga algorithms, matekinoroji ari kubuda, kana kunyangwe zvigadzirwa zvako zvitsva nemasevhisi. Iwe unofanirwa kuenderera nekugadzirisa kufamba kwako kuti ubudirire pakukwezva, kuzivisa, uye kushandura vashanyi.
Unoda imwe fananidzo? Zvakafanana nekubvunza mumwe munhu kuti, "Zvinoda marii kuti uwane hutano?”Kuwana hutano kunoda kudya zvine hutano, kurovedza muviri, uye kuvaka simba nekufamba kwenguva. Dzimwe nguva kune zvipingamupinyi nekukuvara. Dzimwe nguva kune zvirwere. Asi kuwana hutano hauna mugumo, zvinoda kuenderera kwekugadzirisa uye kugadzirisa sezvatinokura.
Pane shanduko dzinoverengeka dzinogara dzichida kuyerwa, kuongororwa, uye kugadziridzwa pawebhusaiti yako:
Kukwikwidzana Kuongorora - kugadzirisa uye kugadzirisa kuti usiyane iwe kubva kumakwikwi ako. Sezvo ivo vachigadzira zvinopihwa, kugovana kuzivikanwa, uye kugadzirisa yavo chigadzirwa uye sevhisi zvinopihwa, zvakanyanya iwe.
Shanduko yekushandura - yako maitiro ekuunganidza anotungamira kana vatengi vari kuwedzera kana kudzikira? Uri kuita sei kuti zvive nyore? Unotaurirana here? Dzvanya-Kufona? Mafomu ari nyore-kushandisa?
Emerging Technologies - sezvo matekinoroji matsva ari kutarisirwa, urikuishandisa here? Yemazuva ano mushanyi webhusaiti ane tarisiro dzakasiyana zvakasiyana, achida kuzvishandira. Mumwe muenzaniso wakanaka kuronga musangano.
Dhizaini Kufambira Mberi - bandwidth, zvishandiso, masikirini esisitimu… tekinoroji inoenderera mberi nekugadzira chiitiko chemushandisi chinogamuchira shanduko idzi chinoda shanduko yenguva dzose.
Tsvaga Engine Optimization - madhairekitori, nzvimbo dzeruzivo, zvinyorwa, masaiti enhau, uye vakwikwidzi vako vese vari kuyedza kukurova mumainjini ekutsvaga nekuti avo vashandisi vane chinangwa chikuru chekutenga. Kuongorora yako yakakosha kero masosi uye kugadzirisa yako zvemukati zvakakosha kuti urambe uri pamusoro peiyi yakaoma svikiro.
Chero chipi chekushambadzira agency kana nyanzvi yaunobhadhara inofanira kunge ichinyatso kuziva nezve yako indasitiri, makwikwi ako, kusiyanisa kwako, zvigadzirwa zvako nemasevhisi, yako yekumaka, uye yako nzira yekutaurirana. Ivo havafanirwe kungove vachisekesa dhizaini uyezve vachitengesa kunze kwekuitwa kweiyo dhizaini. Kana zviri izvo chete zvavari kuita, iwe unofanirwa kutsvaga mutsva wekushambadzira waunoshanda naye.
Chengetedza In A Dhijitari Kushambadzira Maitiro, Kwete Project
Yako webhusaiti mubatanidzwa weiyo tekinoroji, dhizaini, kutama, kusangana, uye - zveshuwa - zvemukati zvako. Zuva rako Website itsva iri kurarama haisi iyo yekupedzisira chirongwa chako chedigital kushambadzira, iri chaizvo Zuva re1 rekuvaka zvirinani kushambadzira kwedhijitari kuvapo. Iwe unofanirwa kunge uchishanda nemumwe wako arikukubatsira kuti uone hurongwa hwese hwekuendesa, kuisa pamberi pega danho, uye kubatsira kuzviita izvo.
Kunyangwe iri mushandirapamwe wekushambadzira, kuvandudza zano revhidhiyo, kugadzira mepu dzevatengi, kana kugadzira peji rekumhara… iwe unofanirwa kunge uchiisa mari kune mumwe wako anonzwisisa mashandiro anoita zvese pamwe chete. Kurudziro yangu ingave yekukanda yako webhusaiti bhajeti uye, pachinzvimbo, sarudza mari iwe yaunoshuvira kuita mwedzi wega wega kuti uenderere mberi nekuita yako yedhijitari yekushambadzira zano.
Ehe, kuvaka iyo Website itsva inogona kuve chikamu chehurongwa hwakazara, asi irikuenderera mberi gadziriso ... kwete chirongwa chinofanirwa kuzopedzwa.
Tags: bokakuenderera mberi kugadzirisakutendeuka optimizationNhamba yeNew Websitewebhusaiti bhajetiwebhusaiti mutengowebsite web design